Ma E Kin, modern novelist (1891-1975) | Bo ဘိုဘိုလန်းစင်
« မောင်ထင်သည် နောက်ဆုံး၌ တိုင်းပြည်အခြေအနေကို အောက်ပါအတိုင်း ထင်မြင်ချက်ပေး၏။
သူကောင်း စစ်ဗိုလ်ချုပ် »
Ma E Kin, modern novelist (1891-1975)
ကာလပေါ် စာဆို မအေးခင် (၁၈၉၁-၁၉၇၅)
ဣန္ဓာဝံသနဲ့ ဝိဇယကာရီ နန်းတွင်းဝတ္ထုကြီးများရေးသူ လှိုင်ထိပ်ခေါင်တင်နောက်မှာ ပထမဆုံးဗမာဝတ္ထုရေးဆရာမလို့ ဆိုရမယ့် မအေးခင်ရဲ့ ဝတ္ထုတွေ ၂၀၀၉ကပဲ တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နဲ့ နှစ် တရာပြည့်သွားတယ်။ တိတ်ဆို အနှစ် ၄၀ အတွင်း ဘတ်ဖူးတဲ့သူ မရှိလောက်တဲ့ ဝတ္ထုတွေမို့ပါပဲ။ ချစ်ရိုးအမှန် (True Love by Ma E Khin)နဲ့ ဟဒယမျက်ရှင် Vitthu တွေကို ပထမနှိပ်ပီးနောက် တခါမှ ပြန်မရိုက်ဖြစ်ပါ။ စစ်မဖြစ်ခင်ကပဲ ဒီဝတ္ထုတွေကို လူတွေမေ့နေပီ မှတ်ပါတယ်။
ကောလိပ်ကျောင်းသားမောင်သာလှိုင်နဲ့ မသိန်းရှင်? (Sin) တို့ရဲ့ မပြေတဲ့ချစ်ရေးကို မောင်ဘကို (ထိုခေတ်မှည့်ရိုးထုံးစံအရ ခိုဖြစ်မယ်ထင်တယ် Ko နဲ့ ပေါင်းသော်လဲ)၊ ခင်ခင်ညွန့်စတဲ့ ဇာတ်ပြိုင်တွေနဲ့ ယက်ရှယ်ထားတာပါ။ အလဇ္ဇဘက်ဂက်စ်ကဲ (Elizabeth Gaskell)၊ မစ္စစ်ဟင်နရီဝုဒ် တို့လို ဝိတိုရိယပုံစံ အချစ်အလွမ်းဝတ္ထုမျိုးရေးတဲ့ မအေးခင်ကို ဗမာဂျိန်းအော်စတင်လို့ ပါမောက္ခ ဒေါက်တာဘဟန် (၁၈၉၀-၁၉၆၇)က မြန်မာနိုင်ငံသုတေသနအသင်း ဂျာနယ်က ချစ်ရိုးအမှန်ဝတ္ထုဝေဘန်စာမှာ ၁၉၁၇ က မှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ စာအုပ်တန်ဘိုး တကျပ် ရှစ်ပဲ (Re. 1.8)နဲ့ ရောင်းချတယ်လို့လဲ သိရပါတယ်။ တကျပ်ခွဲဆိုတဲ့ တန်ဘိုးဟာ အနှစ် ၁၀၀ တုန်းကတော့ အတော်မသေးတာပါပဲ။ နောက် အနှစ် ၄၀ ကျော် ရှုမဝခေတ်က ၂ ကျပ်တန် မဂ္ဂဇင်း ဝတ္ထုထက်ပင် အများကြီး ဈေးပိုပါတယ်။ အဲဒိခေတ်က မြောင်းမြ မင်းပွဲစိုးပွဲတွေမှာ ဒီဝတ္ထုကို ဇာတ်ခင်းကကြတယ်လို့လဲ ပါလီမန်အတွင်းဝန်ဟောင်း ဒဂုန်ရွှေပြည်စိုး(ဦးသန့်တင်၊ ၁၉၁၀-၁၉၉၅)က ရှုမဝမှာ ၁၉၇၀ လောက်က ရေးဘူးပါတယ်။
ဒေါက်တာဘဟန်ရဲ့ စာအုပ်ဝေဘန်ချက်မှာ စာရေးဆရာမကို စစ်ကဲကြီး ဦးဘိုးဗြေ (U Po Bye) K.S.M. မှတဆင့် ဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ ရေးပါတယ်။ ဦးဘိုးဗြေက သူ့ဘခင်ပါ။ ၁၉၆၁ ပြည်သူ့စာပေတိုက်ထုတ် Who’s Who in Burma 1961 ဦးအောင်ခိုင်အကြောင်းမှာတော့ ဦးဘိုးဗြေ-ဒေါ်မမကို မြေပိုင်ရှင်လို့ပဲ ဘော်ပြပါတယ်။ ဖြစ်တန်ရာက ပင်စင်ရိက္ခာတော်ခံပီးမှ လယ်မြေအငှားချပီး အနားယူကြပုံပါ။ ဟိုက်ကုတ် လွှတ်တော် တရားဝန်ကြီးနဲ့ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ဥပဒေမဟာဌာနမှူး ပါမောက္ခ အောင်ခိုင်(၁၉၀၁-၁၉၆၆?)ဟာ ဒေါ်အေးခင် မောင်ပါ။ ကိန်းဘရစ်က မဟာဝိဇ္ဇာရတဲ့ Justice အောင်ခိုင်ကို ၁၉၆၁ ကွန်ဂိုမှာ ဝန်ကြီးချုပ်လူမွန်ဘား အသတ်ခံရတဲ့အမှုစစ်ခုံရုံးမှာ တရားသူကြီးအဖြစ် ခန့်အပ်ခံရပါတယ်။ ကြေးမုံထဲက ဦးအောင်ခိုင်နာရေးဘိတ်စာမှာ မမအေး၊..တို့၏မောင်လို့ဘော်ပြတာ တွေ့ဘူးပါတယ်။ ဒေါ်အေးခင်ဟာ ၁၉၇၀လောက်က မြောင်းမြမှာ အသက်၈၀ကျော် အပျိုကြီးဘဝနဲ့နေသွားတယ်လို့လဲ ရွှေပြည်စိုးက ဆိုပါတယ်။
ဟိုအနှစ်တရာက အထက်လွှာ မြန်မာမိန်းကလေးတွေရဲ့ လူမှုဘဝကိုသိရအောင် ဘတ်ကြည့်ကြပါအုံး။… “အင်္ဂလိပ်ဘာသာကို လယ်လယ်ပတ်ပတ်။ ရေးတတ်ဘတ်တတ်မှ။ ချက်ရေး ပြုတ်ရေး အချုပ်အလုပ်။ အိမ်ထောင်ခမ်းနားကိုဆောင်တတ်မှသဘောကြကြသည်။ နောင်သားသမီးများကို။ ပညာသင်ခြင်း။ အစေခံတို့ကို စီမံဆုမ္မခြင်း အကြောင်းများ ရှိသတဲ့ရှင့်။ မြန်မာမင်း လက်ထက်ကကဲ့သို့။ မင်းကယ်။ စိုးကယ် အခေါ်ခံ၍။ ချမ်းညိမ်းစွာ နေနိုင်သည်ခေတ်မဟုတ်။ လင်သားနှင့်အတူ။ ဒိုးတူပေါင်ဘက် စီမံခန့်ခွဲနိုင်မှ။ သာ၍တော်သတဲ့ရှင့်။ သည်ထက်လွန်ကဲ၍။ စောင်း။ စန္တရား။ သရော။ ဘင်ချိုမိကြောင်းများကို တီးတတ်၍။ သီခြင်းများ သည်ကုံးတတ်လျှင် သာ၍ချီးမွမ်းခံရသေးသတဲ့ရှင့်။” ပါတော်မူတာ ရာစုတစိတ်ပဲ ရှိသေးတာမို့ ခေတ်သစ်ရဲ့ အရွေ့အပြောင်းကို နှလုံးမတွေ့ကြတာလို့ပဲ သဘောရပါတယ်။
“ဘီဧအောင်လျှင်။ ငွေနှစ်သောင်းလောက်ပါတဲ့ မိန်းမကလေးရမလေ့နှင့်ပြောလိုက်ထာ။”…
“သမီးကိုအိမ်ထောင်ပေးစားရာတွင် လူကိုမစုံမက်ဘဲလျက်။ ရွှေငွေကိုစုံမက်ပါလျှင်။ သမီးကိုရောင်းစားသည့် လက္ခဏာနှင့်တူပါသည်။”
သူတို့ခေတ်က ပိုက်ဆံမရှာရတဲ့ အထက်လွှာနဲ့ လူလတ်တန်းစားမိန်းမများရဲ့ လူမှုအမြင် လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ လိင်အရ နေရာယူမှုသဘောတွေက ဒီခေတ်နဲ့ ဘယ်လောက်ကွာနေတယ်ဆိုတာ သိနိုင်ပါတယ်။
ဝိတိုရိယခေတ်သြဇာမပျောက်သေးတဲ့ သတ္တမအက်ဒွပ်ဘုရင်ခေတ်က အသက်၂၀လောက် အိမ်တွင်းပုန်း မြန်မာမိန်းကလေးတယောက် အမြင်အရေးဟာ ဒီခေတ်စာရေးနေတဲ့ မြန်မာတချို့ထက် ဂွတ်တာတော့ ဧကန်ပါဘဲ။ သူ့နောက် မျိုးဆက်က စာရေးဆရာမတွေပင် အိမ်က ဝတ္ထုဘတ်တာမကြိုက်၍ ခြင်ထောင်ထဲ ခိုးဘတ်ရသေးတာမို့ ဝတ္ထုစာအုပ်ထုတ်ပေးတဲ့ မိဘများရဲ့ ခေတ်မီမှုကလဲ ထူးဆန်းပါတယ်။ စုတ်တီးစုတ်ပဲ့ဝတ္ထုတွေ မထွက်သေးလို့ဆိုရအောင်လဲ ဝန်စာရေးဦးကြီးရဲ့ ချဉ်ပေါင်ရွက်သည်မောင်မှိုင်းဟာ မောင်ရင်မောင် မမယ်မနဲ့ မတိမ်းမယိမ်းထွက်တာပါ။
“ကြည်လင်ဧမြစွာ။ ရှုဘွယ်မခန်း ဖြစ်သော။ ညီညာသန့်ရှင်း။ စိန်းစိန်းညိုသော။ မြက်တိုခင်းတို့မှာ။ သင်းသင်းပြန့်ပြန့်။ ဝဲယာဘက်ခြုံ။ ရောင်မျိုးစုံသော ပန်းအုံ ပန်းခက်တို့မှ။ ပြန့်ထွက်၍။ ရနံ့လှိုင်သောညနေချမ်း အချိန်ကို ရောက်ကြလေ၏။”
ဒဂုန်ခင်ခင်လေး၊ ခင်လေးဆွေ၊ အင်ဒီပင်းဒင့်မစန်း၊ ခင်စောမူ၊ မြစ်ကြီးနားအမာ၊ မဒမ်သုခ၊ မာလာ၊ ခင်မျိုးချစ်၊ မြမဉ္ဇူ၊ နုယဉ်၊ ရဝေလှိုင် (ဂျာနယ်ကျော်မမလေး)၊ မရီကြိန်၊ မမြတ်လေးစတဲ့ စစ်ရှေ့ခေတ်ဗမာမိန်းမစာဆိုတွေဟာ မအေးခင်ရဲ့ စာပေညီမများ သမီးများ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ၁၉၂၀ မြန်မာမဂ္ဂဇင်းများ ခေတ်စားလာချိန်မှာ မအေးခင် မည်သည့်အတွက်ကြောင့် စာဆက်မရေးခြင်းကိုကား တွေးမရပါ။ အင်းယားလမ်းမှာ ကျန်နိုင်သေးတဲ့ ဦးအောင်ခိုင်မိသားစုက ဆွေမွေမျိုးမွေကို ထိန်းတဲ့အနေနဲ့ မအေးခင်ဝတ္ထုတွေကို ပြန်ရှာထုတ်သင့်ပါတယ်။ ဒေါ်အေးခင်ရှိသေးရင်လဲ ဒီနှစ် ၁၂၀ ပြည့်ပါပေါ့။ လက်ရှိ ဝါအရင့်ဆုံး ဗမာစာရေးဆရာမများက ကြည်အေး (၁၉၂၉ မွေး)နဲ့ ခင်ဆွေဦး (၁၉၃၂ ?မွေး)တို့ပါ။
Filed under: anniversaries, history, literature	|7Comments
7 Responses to “Ma E Kin, modern novelist (1891-1975)”
1 Ma Shwe Mi on January 13, 2011 said:
သက်ကြီးစကားသက်ငယ်ကြားဆိုသလို ဒီလိုတွေဖတ်ရ၊မှတ်ရ၊သိရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်။ 😀 ဒီ Blog မှာ လောလောဆယ် ဒီဆောင်းပါးကိုအကြိုက်ဆုံးပဲ ။နောင်များလည်း ကျမတို့မမှီလိုက်တဲ့ ရှေးခေတ်စာပေလောကကြီးအကြောင်းတွေရေးဘာဦး ..
2 saw thet lin on January 13, 2011 said:
ဒီလို မှတ်တမ်းတွေ များများ ဖော်ထုတ်နိုင်ပါစေဗျာ။ အားပေးလျှက် …. ။
3 bobolansin on January 13, 2011 said:
ဖေ့စ်ဘုတ်မှာ ရေးထားတာကို နဲနဲပြန်ရှိုင်းလိုက်တာအကိုး) ကျေးဇူးပါ
4 bobolansin on January 13, 2011 said:
မအေးခင် ဒီလိုစာတွေရေးဘို့ ဘယ်က တွန်းအားရလဲ။ စာမျိုးရိုးရှိလား။ ဘာစာတွေ ဖတ်ခဲ့လဲ။ ပညာရေး ဘယ်လောက်ရှိလဲ။ သူပေါင်းတဲ့ မြောင်းမြ အထက်လွှာက အနုပညာခံ ဘယ်လောက်ဖွံ့ဖြိုးလဲ။ ဒါတွေကို သူရှိတုန်း ဘယ်သူမှ သေချာ မမေးခဲ့ဘူးထင်တယ်။ မြန်မာစာဌာန စစ်ပီးမှာ ထွန်းကားလာတာ ရှေးစာတွေနဲ့ ဝန်ပိနေတယ် ထင်တယ်။
5 ko paing on January 15, 2011 said:
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အခုလိုတွေ ဖတ်ရတာ .. ဒါပေမယ့် ဘာလို့ တမျိုးဖြစ်နေတလာလဲ ဖတ်ကို ဘတ် နဲ့ပဲ ပေါင်းထားကြတယ် ရှေးတုန်းက အဲလိုပေါင်းခဲ့ကြတာလား .. ဒါမှမဟုတ် .. အခုရေးပီးတင်တဲ့ လူက မှားတာလား .. နားမလည်လိုပါ .. တစိတ်ပြန်ကြည့်ကြပါဦး ..
6 bobolansin on January 15, 2011 said:
7 decharlie on April 23, 2011 said:
စာတွေဝင်ဖတ်သွားပါတယ် ကိုဘိုဘို ရေ ချစ်ရိုးအမှန်မအေးခင် ကိုပြန်ရှာဖတ်ခွင့် ရချင်ပါတယ် ကြိုက်လွန်းလို့ facebook မှာ share လိုက်ပါပြီ 🙂